Nipoitra tampoka tao anaty mpihazakazaka 84 isa mandray anjara i Jonathan Boucher, izay efa nahazo ny tso-dranon’i Médéric Clain (mbola tompon’ny akanjobà mavo hatreto) handrombaka ny laharana voalohany tamin’ny 111 km ity.
"Tao anaty hafanana tanteraka no nanaovana iny hazakazaka iny satria raha ny vinavinako dia nahatratra 42° C izany. Ny fanampian’ireo mpiray ekipa amiko no nahazoako iny dingana iny", hoy i Jonathan Boucher.
Tamin’ny alalan’ny fe-potoana 3 ora 18’06’’ no namitany ny halavirana, raha voany tamin’ny alalan’ny 4’07’’ ry Célestin Rakotohasimbola, izay tonga faharoa tamin’izany. Teo amin’ny 44 km (point chaud Telma) dia izy ireo no tonga aloha, izay nahavoazany an’i Hasinavalona Razafindrakoto. Tany amin’ny andiany fahatelo tamin’ireo mpihazakazaka vao hita ry Lantonirina Manjakazafy na Bulldozer sy Jean de Dieu Rakotondrasoa na Ravoatabia tamin’ity. Hatramin’izao izany dia mbola i Médéric Clain ihany no mitana ny laharana voalohany vonjimaika, izay ananany tombom-potoana maherin’ny 5 minitra mialoha an’i Alexis Tourtelot raha 7 minitra kosa ny elanelany amin’i Lantonirina Manjakazafy. Heverina fa kely sisa ny herijika ho an’i Madagasikara amin’ny fahazoana an’ity andiany fahavalo ho an’ny fihodinana an’i Madagasikara am-bisikileta ity noho ny tsy fahaiza-miaraka miady eo amin’ireo ekipam-pirenena malagasy.
Henjakenjana ny miandry an’ireo mpifaninana anio satria halaviran-dalana mirefy 100 km mihazo an’i Miandrivazo sy Mandoto no tsy maintsy vitaina. Ireo manana hafainganam-pandeha no tena tsy dia misy fiakarana firy. Hanainga amin’ny 1 ora sy sasany ao Miandrivazo, izay ao anatin’ny hafanana tanteraka izy ireo.